सुन तस्करीका नाइके पौडेललाई माओबादीमा किन भित्र्याइयो ? अग्नि र अनन्तको यस्तो छ स्वार्थ::त्रिशुलीखवर
सुन तस्करीका नाइके पौडेललाई माओबादीमा किन भित्र्याइयो ? अग्नि र अनन्तको यस्तो छ स्वार्थ
२८ भदौ, काठमाडौँ । माओबादी केन्द्रबाट भोटेकोशी गाउपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका राजकुमार पौडेल सुन तस्करीका मुख्य नाइकेका रूपमा प्रहरीको खोजिमा परेपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तरंग पैदा गरको छ । माओबादी केन्द्रकै उच्च तहका केहि नेता समेत यो काण्डसंग जोडीएपछी घटनाले नयाँ मोड लिएको हो ।
प्रहरी खोजी सूचीमा परेका पौडेल नेपाली कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता हुदै स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मात्रै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । दुई साताअघि राजधानीको टोखाबाट १४ किलो सुन बरामद हुने बित्तिकै फरार रहेका पौडेलको उठबस माओबादीका नेता अग्नि सापकोटासंग रहदै आएको स्थानीय माओबादीका नेताले नाम नबताउने सर्तमा त्रिशुलीखबरलाई बताए । त्यसो त पौडेललाई माओबादी पार्टीमा भित्राउन सापकोटसंगै अर्का नेता वर्षमान पुन अनन्तले समेत पहल गरेको ती नेताले जानकारी दिए ।
सुनसँगै पक्राउ परेका पेम्बा शेर्पालगायतको बयान र अन्य स्रोतबाट सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारका रूपमा देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पौडेलको खोजी गर्दै आएको हो । स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई टिकट नदीई सापकोटा र अनन्तकै ठाडो आदेश र योजनामा ४० वर्षीय पौडेललाई उम्मेदवारी मनोनयनको केही दिनअघि मात्र टिकट दिएको थियो ।
केही वर्षअघिसम्म तातोपानी नाका हुँदै तिब्बततर्फ रक्तचन्दनको व्यापक तस्करी चल्दा समेत पौडेल सक्रिय थिए । सापकोटा र अनन्तकै आशिर्वाद पाएका कारण पौडेल सुरक्षित रहदै आएको श्रोतले जानकारी दिएको छ । यी दुई नेताकै आडमा पौडेलले रक्तचन्दनको कमाइलाई अबैध सुनको तस्करीमा लगानी गरेको समेत श्रोतको दाबी रहेको छ ।
पौडेलको पुरै परिवार अबैध धन्दामा संलग्न रहदै आएका छन् । भारतमा लुकेर बसेका पौडेलको अहिले पनि माओबादीका यी नेतासंग नियमित सम्पर्क गर्ने गरको श्रोतले बताएको छ । सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङकट्टीका पौडेल नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । उनी तातोपानी नाकामा व्यवसायमा सक्रिय थिए । भूकम्पले तातोपानी नाका बन्द भएपछि उनी केरुङमा सक्रिय भए ।
पौडेल परिवारका चारै दाजुभाइ तस्करीमा जोडिँदै आएका छन् । उनका दाजु बच्चु हुन्डी कारोबारमा जोडिने गरेका छन् । २०६९ भदौ ३० मा रक्त चन्दन तस्करीमा पक्राउ परेका ध्रुव पौडेल उनका दाजु हुन् । फुल्पिङकट्टीको स्यालाङकट्टी हुँदै ५० भन्दा बढी भरियालाई बोकाएर ६ टन रक्तचन्दन तातोपानी नाका पार गराउने क्रममा प्रहरी र तस्करबीच जम्काभेट हुँदा गोली चलेको थियो ।
पौडेलको अपराधिक गतिबिधि थाहा हुदाँहुदै उनलाई अनन्त र सापकोटले किन पार्टीमा भित्र्याएर टीकट दिएको भन्दै कार्यकर्ताले व्यापक असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । कार्यकर्ताका असन्तुष्टिबीच जबर्जस्ती टिकट दिएर पौडेलको आपराधिक चरित्रलाई छोप्न नेताहरु नै लागेपछि कार्यकर्ताले सापकोट र अनन्त माथिनै शंका गर्न थालेका छन् । यी दुई नेताले पौडेलबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिएको माओबादी निकट उच्च श्रोतको दाबी छ ।